निको भएको २९०
डा. राजु अधिकारी अरु कसैका लागि गरिए पनि प्रार्थना अन्ततः आफ्नै लागि बढी काम लाग्छ। ईश्वर पुकारेर उनको नाममा प्रार्थना गर्ने धार्मिक चलन छ। तर, प्रार्थना ईश्वरका लागि भनिए पनि आखिर प्रार्थीका लागि नै हो। अरुको राम्रो होस्, भलाइ होस्, स्वास्थलाभ होस्, मंगल होस् भनी प्रार्थना गर्दा उसल
इन्टरनेटको त कुरा छोडौँ, हेलो भन्न त पाउनु परो
हामीलाई इन्टरनेट चलाएर विलासी जीवन हैन हेलो भनेर जीवन चलाउने रहर छ, यस्तो माग समेत उठ्ने गरेको छ। नेपालको दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र गुणस्तर दक्षिण एशियामै गौरव गर्न लायक भनिरहँदा संसदीय समितिले गुणस्तर र सेवा विस्तारको धिमा गतिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्च
रुकुम दलित हत्या काण्डः ‘बुहारी लिन जाँदा यो अवस्था भयो’
तीन वर्षदेखिको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने लक्ष्यका साथ जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका २१ वर्षीय नवराज विक र पश्चिमरुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीकी १७ वर्षीया मल्ल थरकी युवतीकहाँ पुगे। नवराज र उनका १९ जना साथी बाटोमा हौसिँदै गएको बताउँछन्। तर जब युवा सोती पुगे, माहोल एकाएक बिग्रियो। कथ
मातृभाषा र स्थानीय विषयको विकल्पमा संस्कृत शिक्षा
गणेशप्रसाद भट्राई, निर्देशक (पाविके) भाषा पढाउने भनेको त आवश्यकता पहिचान भएपछि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले माग गरे पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नमूनाको रूपमा पाठ्यक्रम बनाउने हो। फेरि, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रममा एउटा विषय स्थानीय तहबाट बन्नुपर्छ। स्थानीय तहबाट बन्ने भनेको सबैभन्दा पहिले मा
कोरोना कहरमा आत्मबल नलडखडाओस
धीरज मैनाली विश्व आज कोरोनाको महामारीले आक्रान्त छ। चीनबाट शुरुवात भएर विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोनाले मानव सभ्यता माथीनै धावा बोलेको आवस्था छ। प्राकृतिक सत्ताभन्दा ठुलो कोही छैन अनि मानव जीवनका लागी उपयोगी परापूर्वकालदेखि अनुभव तथा खोजको उपज हाम्रा लागी विभिन्न जीवन जिउने सिद्दान्त
डा. रामदेव पंडित तराईदेखि पहाडसम्मका मानिसले जानेर वा नजानेर विभिन्न रोगको उपचार गर्न असुरो प्रयोग गर्दै आएका छन्। १२०० मिटर सम्मको उचाइमा पाइने असुरो जंगली (खेती नगरिएको) रुपमा पाईने वन औषधीय जडिबुटी हो। नेपाल र भारतमा हिजोआज असुरोको खेती पनि गरिएको पाइन्छ। एकपटक उम्रिसकेपछि सकेसम
कसरी प्रयोग गर्ने पुदिना ?
डा. रामदेव पण्डित वसन्त ऋतुको आगमनसँगै वनस्पतीहरुमा हरीयाली छाउँछ । घरवरिपरी झारपातहरु जताततै उम्रिन्छ । त्यहीँ झारपातहरुकै माझमा हल्लक हुर्किने हरियो वर्णको वनस्पिति हो पुदिना । सामान्यतः यसलाई कसैले खेती गरेको पाईदैन । उपयुक्त वातावरणमा यो आफै उम्रिएको पाईन्छ । तर यसलाई चिन्न नसक्दा, यसको
डाक्टरसाप! सस्तो लोकप्रियताका लागि सडकबाट बिरामी उद्धार गर्ने, तर अस्पताल आएका बिरामीको उपचार नगर्ने ?
विवेक विवश रेग्मी ‘कोरोना संक्रमण फैलिएको जिल्लाबाट ल्याइएको भन्दै गर्भवती महिलालाई अप्रेसन थियटरबाटै निकालियो’, ‘विरामीको भर्ना गर्न नमान्दा एकजनाको निधन’, ‘अस्पताल वरिपरि घुमाउँदा–घुमाउँदै मृत्यु’, ‘स्वास्थ्यमन्त्रीलाई विरामीको पत्र- अब त बाँ
कुवेतले नेपाललाई भन्यो- ४ हजार नेपाली कामदार छिटो फिर्ता लैजाऊ, सम्पूर्ण खर्च हामी व्यहोर्छौं
सुरेन्द्र पौडेल खाडी राष्ट्र कुवेतले त्यहाँ रहेका ४ हजार नेपाली कामदारलाई छिटो स्वदेश फिर्ता लैजान नेपाल सरकारलाई भनेको छ । लामो समयदेखि कुवेतमा अवैध तरिकाले बस्दै आएका ४ हजार नेपालीलाई कुवेत सरकारले छिटोभन्दा छिटो फिर्ता लैजान भनेको हो । कुवेतले फिर्ता गर्न लागेका नेपालीमा आधाभन्दा बढ